ဆုတောင်းမှားကို ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသလား.. | " မနာပဒါယီ "
။ အချိန် 5/03/2010 07:57:00 AM
Q. ဆရာတော် ဆုတောင်းမှားပြီးတာကို ဘယ်လို ရုပ်သိမ်းလို့ ရပါသလဲ ဘုရား။ နည်းလမ်းလေး သိပါရစေဘုရား…
A. အမှားတောင်းခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းတစ်ခုကို ပြန်ပြီးချေဖျက်ချင်ရင် စတောင်းတုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်အတိုင်း ပုံစံတူ၊ စိတ်စေတနာတူနဲ့ ပြန်လုပ်ပြီး ဖြစ်ပါစေလို့ တောင်းခဲ့တဲ့ ဆုကို မဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့ ဆိုကာ ပြန်ဆုတောင်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ဆုတောင်းမှားပြီးတာကို ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ် ဆိုတာထက် ကံတစ်ခုကို ကံတစ်ခုနဲ့ လွှမ်းမိုးလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ရှေ့ကကံထက် နောက်လုပ်တဲ့ကံကို အားကြီးအောင် လုပ်ပြီး ရှေ့ကံ အကျိုးပေးခွင့် မရအောင် လုပ်တဲ့ သဘောပါပဲ။
စကားကျွံရင် နှုတ်မရဘူး ဆိုတာလိုပေါ့။ စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေမှာ ကံမြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အကျိုးပေးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေမှာ စေတနာနဲ့ လုပ်ခဲ့ရင် အကျိုးသက်ရောက်မှုက ရှိနေမှာပါ။ ဒါကြောင့် စေတနာပါပါနဲ့ လိုလိုချင်ချင် ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းတွေကို ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကံကို လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ သူ့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ ကံတွေကိုလုပ်ပြီး မှားခဲ့တဲ့ကံတွေ အကျိုးပေးခွင့် မသာအောင်တော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပါရစေဆိုတာကို မဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့ ပြန်ပြီးဆုတောင်းတာဟာ ရှေ့ကကံကို နောက်ကကံနဲ့ လွှမ်းမိုးစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းတာ မှားမှန်းသိတဲ့အချိန်ကစပြီး အဲဒီဆုတောင်းတွေကို မေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး တစ်ခြားကုသိုလ်တွေနဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ မှားပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့ ကံအကျိုးပေး မလာနိုင်အောင် တစ်ခြားကံတွေနဲ့ အဆက်မပြတ် ထိမ်းသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကံအကျိုးပေးမှုတွေ ရောက်မလာနိုင်အောင် ကံကို ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ရပါမယ်။ အဲဒီဉာဏ်က အရိယာမဂ်ဉာဏ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံတွေကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်ဖြတ်နိုင်တာကတော့ ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ပြီး အရိယာမဂ်နဲ့ ဖြတ်တဲ့နည်းဟာ အကောင်းဆုံး၊ အားအကြီးဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ကံပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ် စေတနာနဲ့ လုပ်မိရင် အကျိုးပေးမှုက ရှိနေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီကံတွေကို ၀ိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲ ဖြတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။
ဒါဆိုရင် တခြားဒါနသီလ ကုသိုလ်တွေ လုပ်စရာမလိုဘဲ ၀ိပဿနာ အလုပ်ပဲ လုပ်ရမှာလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ တစ်ခြားကုသိုလ်တွေလည်း လုပ်ရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် သီလကို လုံအောင်ထိန်းပြီး ဒါနကုသိုလ်၊ ဘာဝနာကုသိုလ်တွေ လုပ်ရပါမယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာသာ ခုနပြောသလို ဆုတောင်းတွေနဲ့ ချီနှောင်မှု မဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ၀ဋ်ကိုတောင့်တတဲ့ ကုသိုလ်မျိုး မဖြစ်စေဘဲ ၀ဋ်ကင်းပြတ်ရာ ကုသိုလ်မျိုး ဖြစ်အောင် လုပ်ရပါမယ်။ ၀ဋ်ကင်းပြတ်ဖို့အတွက် ကုသိုလ်လုပ်တိုင်း ဒီလုပ်တဲ့ကံတွေအပေါ်မှာ တွယ်တာမှု တဏှာမပါစေဘဲ ၀ဋ်ကင်းပြတ်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေလိုတဲ့ စေတနာ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ရပါမယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကံတွေအပေါ်မှာ လိုချင်မှုတွေ၊ တောင့်တမှုတွေ မဖြစ်စေဘဲ ကံကံရဲ့အကျိုးကို ယုံကြည်မှုနဲ့အတူ အစွဲကင်းတဲ့ ကံမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကံအကျိုးပေးမှုတွေရဲ့ ချယ်လှယ်မှုက ကင်းပြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်များက ဘာကုသိုလ်ပဲ လုပ်လုပ် နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယော ဟောတု- နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အထောက်အပံ့ကောင်း ဖြစ်ပါစေလို့ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုစေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက မသိလို့ မှားခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းအမှား ကံတရားတွေကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အဲဒီကံတွေ အကျိုးပေးခွင့်မသာအောင် တစ်ခြားကံတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီကံအကျိုးပေးတွေကို ပြတ်သွားအောင် ၀ိပဿနာအလုပ် အားထုတ်ပြီး ဖြတ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဲဒါဆိုရင် မှားခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းအတွက် အကျိုးပေးမှု ရောက်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီလို မလုပ်နိုင်သေးရင်လည်း တစ်ခြား ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို အဆက်မပြတ် ပြုလုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး သေခါနီးအချိန်အထိ လက်ရှိဘ၀ လုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းကံကို အာရုံပြုနိုင်မယ်ဆိုရင် သေပြီးဒုတိယဘ၀မှာ သေခါနီးဖြစ်တဲ့ စိတ်အစဉ်က အနီးဆုံး၊ အရင်ဆုံး အကျိုးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ ကံတစ်မျိုးကို ကံတစ်မျိုးနဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်အောင် လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ကံတွေအပေါ် နောင်တဖြစ်နေတာထက် ကံတွေအားလုံး ပြတ်စေနိုင်တဲ့ တရားဘာဝနာ ပွားများအားထုတ်ပြီး ကံတွေကို ဖြတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားတာက ပိုကောင်းတဲ့အတွက် ကံကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲ ဖြတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ အကြံပြု တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မသိလို့မှားပြီး ဆုတောင်းခဲ့တာတွေကို သိလိုက်တဲ့အချိန်က စပြီး ၀ဋ်ကင်းပြတ်လိုတဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ပဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ဆရာတော် ကျေးဇူးပါ ဘုရား။ နောက်မသိတာလေးတွေ
ကိုလည်း မေးခွင့်ပြုပါ ဘုရား။ ဆရာတော် ညွှန်ပြသည့် အတိုင်း လုပ်ဆောင်လိုက်ပါမယ် ဘုရား။ ဆရာတော်ရဲ့
gtalkကို တပည့်တော် အပ်ထားပါတယ် ဘုရား။ လက်